Paragoay: Mitsipaka Tsy Handray Ny Karamany Ny Filoham-pirenena Vaovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Mey 2018 15:43 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Swahili, English
Natombony tamin'ny fanambaràna fa ho laviny ny fomba fitondra azy, ny fe-potoana vaovao an'ny Filoham-pirenena Paragoay [amin'ny fiteny anglisy], Fernando Lugo [amin'ny fiteny anglisy]. ” Tsy ilaiko io karama io, izay volan'ny mahantra” [amin'ny fiteny espanola], hoy ny fanambaràn'i Lugo [ampahatsiahivina fa Joseph Stiglitz , nahazo ny Loka Nobel momba ny toekarena, dia nanolotra ihany koa maimaimpoana ny asany ho an'i Paragoay]. Manana fomba fijery samihafa ireo blaogera eo an-toerana mikasika io olana io: ireo sasany mitehaka an'io fanapahankevitra io, ny hafa kosa manontany tena hoe ahoana no hiatrehan'i Lugo ireo fandaniany manokana.
Carlos Rodríguez, eo amin'ny blaogim-baovao an'ny olom-pirenena Rescatar [amin'ny fiteny espanola], mamintina ireo fanehoankevitra sasantsasany ao anatin'ny gazety, manamaivana ny mety ho faritra tratr'io fihetsika io sady manipika fa i Lugo pretra teo aloha dia sady tsy manambady no tsy manan-janaka iadidiana, raha toa ireo hafa manontany tena hoe ampiasainy amin'inona ireo vola natokana ho an'ny Fiadidiana ny Lapa. Fijery hafa no ahitan'i Carlos Rodríguez ilay zavatra:
Ao anatin'io toejavatra io, ny fanambaràn'i Lugo handà ny fomba fitondra azy io dia adikantsika ho toy ny hafatra hoe: “tsy noho ny vola no hipetrahako eto”. Hafatra ambony dia ambony sady mahery ao anatina firenena izay ambony ny isanjaton'ireo mpanao politika, ary tena ambony be, mitsofoka anaty fikatsahana fahefana politika mba hanatrarana haingana araka izay azo atao ny fahefana ara-toekarena, amin'ny fangalarana.
Jorge Torres Romero, eo amin'ny blaogy Detrás del Papel [amin'ny fiteny espanola], tsy mitovy fijery toy izany an'ireo zavatra ireo ary tsy mieritreritra afa-tsy ny hoe fanapahan-kevitra hendry io:
Ny ampitson'ny fanambaràn'i Lugo, media sasantsasany no nametra-panontaniana mba hahalalàna raha toa nisy te-hanaraka ny ohatra nataon'ny filoham-pirenena. Mazava ho azy, tsy nisy. Federico Franco (Filoha Lefitra vaovao), ohatra, nanambara fa manana fianakaviana ahiana izy ka noho izany, antony iray ampy tsy hisakanany ny zony ara-dalàna amin'ny fahazoana ny zony ara-drariny handray ny karamany izany.
Inona izany no hiainan'ny Filoha? Iza no handoa ny vidin'ireo fitafiany, ny sakafony, ary mikasika ireo fandaniana hafa tokony ho ataony? Sa ireo tahiriny ve? Hiaina amin'ireo vola miditra amin'ireo tranony ve izy? Handoa hetra ve izy? Sa hiandry fanampiana izy, ireo fanomezana sy fanasàna avy amin'ireo namany?
Sarikely an'i Fernando Lugo APC nampiasàna ny fahazoandalàna Creative Commons.
1 andro izayVenezoela